Wireless mamaly finday po ...
Sarontava masom-borona manafana graphene ity. Ity vokatra ity dia natao indrindra hanamaivanana ny havizanan'ny maso sy hampiroborobo ny fivezivezy. Ny fitaovana fanafanana dia mampiasa fitaovana graphene. Rehefa hafanaina ireo akora graphene dia afaka mamoaka onja-infrared lavitra izy ireo, izay afaka mampisondrotra ny ran'olombelona. Mivezivezy, manamaivana ny havizanan'ny maso. Ity vokatra ity dia mampiasa heaters coating graphene, izay ny kojakoja fanafanana fototra, vokarin'ny orinasanay, ary ny orinasanay dia manana ekipa fikarohana sy fampandrosoana ho an'ny graphene vaovao izay nanova ny ...
Ity dia vokatra vita amin'ny hoditra !, fampiasa finday sy mpihazona finday, miaraka amin'ny charger famahanana tsy misy tariby, azonao atao ny manamboatra endrika, logo na fonosana. Misy fomba roa hametrahana ny telefaona, ny efijery marindrano na ny écrise mitsangana. Na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, ny mpihazona finday dia afaka miantoka fa azo sarohina ny telefaona rehefa eo amin'ny efijery marindrano na mitsangana ny telefaona. Mandritra ny famandrihana dia azonao atao ny mijery horonan-tsary amin'ny telefaona amin'ny; Azo aforitra izy, 8mm monja ny hateviny aorian'ny aforitra, ary azo ampidirina am-paosy. Izy io koa dia ...
Miaraka amin'ny asa aman-draharaha sy ny fampivoarana ny vokatra elektronika dia mila mitondra zavatra be dia be isika rehefa mivoaka handray anjara amin'ny fivoriana sy hetsika hafa, toy ny solosaina finday, solosaina, telefaona, karatra, banky elektrika, tariby mametra, sns. ., zavatra be dia be no arotsaka ao anaty kitapo, izay tena mikorontana tokoa Eny, namokatra vokatra afaka mandamina tsara ny vokatrao izahay ary mitondra anao traikefa tsara tarehy Kitapo fitehirizana orinasa, ento amin'ny hetsika ataon'ny orinasanao io, afaka. ..
Ao amin'ny biraonao milamina, paosy totozy tsara tarehy, miaraka amin'izay dia mpihazona penina sy mpihazona telefaona finday, misy fahatsapana majika ve? Eny, ny ampahany fitehirizany sy ny faritra misy ny totozy dia azo sarahina araka izay itiavany azy, ary azo ampiasaina ihany koa. Hadino ny milaza aminao ny tena zava-dehibe kokoa, izany dia charger tsy misy tariby amin'ny telefaona finday, raha mbola apetrakao aminy ilay telefaona dia mety ho voaloa amin'ny fotoana rehetra ianao, avelao aho hampiditra an-tsipiriany an'ity zavatra vaovao ity: 1. totozy hoditra io. pad, ity mpamokatra ...
Ity vokatra ity dia vokatra manana patanty, miaraka amin'ny fiasa fitehirizana ary ny fiasan'ny tariby tsy misy tariby amin'ny pad mouse multi-functional, fivoriambe fitehirizana ary pad mouse amin'ny alàlan'ny andiana andriamby, azo sokafana na atambatra, ataovy madio kokoa ny birao, indrindra mety amin'ny fanomezana amin'ny fihaonambe, Fanomezana noely, fanomezana raharaham-barotra. Fandraisana andraikitra lehibe: 1. Fitaovana fitehirizana: afaka mitahiry telefaona finday, penina, karatra telefaona, headset Bluetooth, pinan'ny karatra telefaona ary kojakoja elektronika sy birao hafa 2. Fampandoavana tsy misy Wireless, izay ...
Ity vokatra ity dia kely amin'ny habe, multi-fampiasa, misy kojakoja elektronika, miaraka amin'ny fonosana finday sy famandrihana tsy misy tariby, jiro sy asa hafa, mety amin'ny hetsika fampiroboroboana ara-barotra na fanomezana Krismasy Fandraisana andraikitra lehibe: 1.Wayaring charge nirkabel10W / 7.5W / 5W 2. Fampiasana fitehirizana, ao anatin'izany ny tariby famandrihana rehetra eny an-tsena 3. Tompon-telefaona finday 4. Fampandehanana jiro maodely No. SN001 LED Color White Input 9V1.5A / 5V2A Accessories IPone Cable ， TYPE-C Cable, micro ca ...
3in1 tsy misy tariby famandrihana pad totozy
Model No. SD003 Output 10W / 7.5W / 5W Input 9V / 21.5A / 5V 2A finday tompony finday eny Wireless famandrihana ho an'ny telefaona finday, telefaona, famantaranandro marani-tsaina, Teknika fanontana ho an'ny fanaovana pirinty G Letterpress, fanontana UV Fampiasana sehatr'asa fampiroboroboana, fiofanana sy ny fananganana ekipa, fanomezana soa, miverina any an-tsekoly / fizarana diplaoma, fanomezana fanomezana vaovao, fanomezana Tradeshow, fanomezana "misaotra", asa hafa fitaovan'ny PU Brand Sheerfond Logo: ...
Model No. A5-1 Output 5V2A fampidirana 5V 2A fahafaha-4000mAh / 5000mAh / 6000mAh / 8000mAh / 10000mAh Taratasy taratasy A5 Wireless famerenam-bola Gr5W Fampiasana sarin-javatra Pr Fanomezana Orinasa vaovao, fanomezana andro nahaterahana, Fetin'ny ray, Fetin'ny reny, Fisaorana Thanksgiving Material PU ， ABS Brand Fanontana Logo Sheerfond: Famolavolana logo namboarina namboarina namboarina famolavolana loko Custom vokatra habe 228mm * 170mm * 30mm lanjan'ny vokatra 450g Package Size ...
Ireto ny masontsivana momba ny vokatra: Model No. GS002 Anisan'izany ny vokatra Multifunctional kahie, kaopy rano marani-tsaina, adaptatera azo entina, tariby fametahana 9V1.5A / 5V2A Multipunctional kahie Fahaiza-manao: 4000mAh / 5000mAh / 6000mAh / 8000mAh ,, Fidirana: 5V 2A, vokatra : 5V2A, charger tsy misy tariby: 5V1A 5W Wireless charge Gr10W / 7.5W / 5W Application scenario P Fanomezana asa, fanomezana andro nahaterahana, andron'ny ray, Fetin'ny reny, fanomezana Thanksgiving, fanomezana VIP, fanomezana fampiroboroboana, fanomezana ny fihaonambe ...